नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट ? – live 60media
काठमाडौ । रवि कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एउटा फ्ल्याटमा पुगे । खानाका परिकारदेखि मापसेसम्मको राम्रो व्यवस्था भएको फ्ल्याटमा दुईजना युवती थिए । धनगढीबाट काठमाडौं आएका बेला काम सकेर मस्ती मुडमा रहेका रविले एक हप्तासम्म प्रयोग गरेको ट्याक्सीमार्फत त्यो फ्ल्याटको ढोका ढकढकाउने अवसर पाए ।
कतिपय कल गर्ल आफ्ना ग्राहकको मर्जीअनुसार विभिन्न ठाउँमा ‘लङ ड्राइभ’मा समेत जाने गरेका छन् । इन्टरनेट एउटा माध्यम भयो, अर्को क्लव, डान्स रेष्टुरेन्ट र कतिपय डिस्कोमा भेट हुने गरेको पाइन्थ्यो । अहिले ती स्थान बन्द रहेकाले धेरै इन्टरनेट वा ट्याक्सी ड्राइभरको सम्पर्क सुत्रबाट फैलिरहेको छ ।
कल गर्लहरू विभिन्न पेशा, व्यापार, व्यावसायका आवरणमा रहने गरेका छन् । खासगरी वित्तिय र मनोरञ्जन उद्योगमा यस्ता युवतीको संख्या बढि रहेको अनुमान गरिएको छ ।
के हो कल गर्ल ?
कल गर्ल भनेको बाटोमा हिँड्ने ‘शरीरलाई सुख दिन सबै कसरत गरिदिने’ हुन् । उनीहरूले आफ्नो पेशा र व्यावसायलाई आम मानिसलाई प्रस्टसँग खुलाएका हुँदैनन् । उनीहरू कुनै एजेन्सीसँग आवद्ध हुने गरेका छन् । कल गर्लले म्यागेजिन र इन्टरनेटमा आफ्नो विज्ञापन पनि गरेका हुन्छन् । उनीहरूको विज्ञापनलाई एजेन्सीहरूले प्रमोशन गरेका हुन्छन् ।
← कादर खानले अमिताभलाई पर्खिरहे मृत्युको अन्तिम स्वाससम्म, आखिर किन ?
छोराछोरीको भोको पेट भर्न ‘ढुंगा’ नै पकाउने अवस्थामा पुगेपछि यी महिला ! →